नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठक: हात्ति आयो हात्ती आयो फुस्सा ! « Post Khabar
नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठक: हात्ति आयो हात्ती आयो फुस्सा !
Published on:3February, 2020 6:58 am
पार्टी एकिकरण भए पछि झण्डै २ बर्ष पछि धुम धडाका सहित बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा देशका जल्दाबल्दा समस्याहरुमा मिहिन छलफल, विष्लेषण हुन्छ र बैठकले सरकारलाई दिशा निर्देश गर्छ भन्ने पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकले आश गरेका थियो ।
तर बैठक प्रतिद्वन्दी गुटका उपल्ला नेताहरुलाइ गाली गरेर मनको तुष शान्त पार्ने फोरमको रुपमा सिमित भयो । बैठकका निर्णयहरु श्रद्गान्जली, शोक बक्तव्य, बधाइमा सिमित रह्यो । देश निर्माणमा चासो राख्ने बिषयमा बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । यति सतही बहस, छलफल र सतही निष्कर्ष देशको सबैभन्दा ठुलो र सत्तासिन पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा देखिएला भन्ने पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकको अपेक्षा विपरित थियो । आफ्नो सम्पुर्ण उर्जा सतहि छलफल र निर्णयमा खर्च गरेकोले पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकलाई निराशा तुल्याएको छ।
यस बैठकले नेकपाका नेताहरुको चेत जनताको चेत भन्दा धेरै पछाडी परिसके सत्य उजागर गरि दियो । कतिपय सदस्यले त चार महिना देखि आम मिडियामा लगातार हेडलाइन बनेको एमसीसीको बारेमा प्रशिक्षण चाहियो समेत भन्न भ्याए । यसले नेताहरु समसामहिक बिषयको अध्ययनमा कति समय खर्च गर्दा रहेछन भन्ने सत्यलाई उजागर गरि दियो । नेताहरुको चेतनाको स्तर जनताको चेतनाको स्तर भन्दा तल हुनमा नेताहरुको बिकासलाई हेर्ने तौर तरिकामा परिवर्तन नहुनु हो । खुला समाज भएसँगै आम नागरिकले दुनियाका बिकास, उन्नती, तौर तरिका आफैले प्रत्यक्ष देख्ने र बुझ्ने मौका पाए, तर नेताहरु भने राजनितिक षडयन्त्रमा अत्याधिक समय व्यतित गर्ने भएकाले देशभन्दा बाहिर मुन्टो उचालेर हेर्ने फुर्सद नै पाएनन । नेताहरुले अध्ययन र चिन्तन गर्छन भन्ने कुरा त कल्पना बाहिरको बिषय भई दियो । हरेक घटनालाई षडयन्त्रको दृष्टीकोणबाट हेर्ने उहि पुरातन मानसिकताले जकडिएको नेताहरुको सोच भित्र देश निर्माणको भिजन खोज्नु त मुर्खाता हुने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।
मुलुकले एउटा गम्भीर निचोड निकाल्नु पर्ने बेला छ, युगान्तकारी नीति अनुरुप “गेम चेन्जर” आयोजनाहरु संचालन गरेर आर्थिक हैसियत मजबुत पार्ने, समाजबादी यात्रा तय गर्ने र जनताका दिन र दैनिकीसंग जोडिएका समस्या हल गर्ने की? भएको अर्थतन्त्र र आर्थिक हैसियत जनताका दिन दैनिकीमा खर्च गर्ने ? वर्तमानको मुल बहस यो हो । हामी गरिबीको समानुपातिक बितरणमा लाग्ने की कठोर मेहनत र संघर्ष गरेर आर्थिक सम्बृद्धि हासील गर्ने, समाजबाद तर्फ लम्कने र राज्य स्रोतको न्यायोचित बितरण गर्ने? यो सवालमा समाज अहिले रनभुल्ल छ । यस बिषयमा पार्टीले जनतालाइ प्रष्ट पार्नु पर्ने थियो । नागरिकलाइ केही बर्ष कठोर र कठीन संघर्ष गरौ, धेरै सुख सुबिधा नखोजौ, ठुला “गेम चेन्जर” कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित होऔ, जसले हामीलाइ ठुलो आर्थिक हैसियतमा पुर्याउँछ, त्यसपछि सुखभोगको कुरा गरौ भन्ने संदेश दिन सक्नु पर्थ्यो ।
प्रम केपी ओलीले शुरु गर्नु भएको बिकासको यात्रामा कठोर मेहनत गरौ, मुलुक सम्बृद्ध बनाऔ अनि त्यसको न्यायोचित बितरण गरौ भन्ने हो । नेकपामा प्रम ओलीको चेत, सोच, मिसन र यात्राका सहयात्री देखिएन, यो पार्टीको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो । जब सम्म सत्ताधारी नेताहरु चीर निन्द्रामा सुति रहन्छन तबसम्म यो मुलुक कसरी बन्ला? यो देशको संसदले के चिन्तन मन्थन गर्ला?
(गुरु भट्टराईको फेसबुस पोष्टबाट सम्पादन गरिएको)